चितवन काँग्रेस अब जरैबाट बलियो हुँदैछः युवा नेता पौडेल | My News Nepal
This article has been viewed 1588 times
नेपाली कांग्रेसमा आगामी महाधिवेशनको तयारी अहिले तीब्ररुपमा अघि बढेको छ । क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम देशैभरि भएसँगै महाधिवेसनको माहोल बढेको हो । सभापति शेरबहादुर देउवा एकलौटी विभाग विस्तारमा व्यस्त देखिन्छन् । तर विभाग विस्तारलाई मान्यता नदिने भन्दै संस्थापनइतर समुहले असन्तुष्टी जनाईरहेका छन् । यतिबेला विभाग विस्तार गरेर देउवाले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने प्रपञ्च रचेकाले संस्थापनइतर समूहले कडा बिरोधको कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छ । यद्यपि कस्तो खालको बिरोधका कार्यक्रम गर्ने या नगर्ने भन्ने टुंगो भने लागिसकेको छैन । अहिले नेतृत्वकै कारण कांग्रेस अप्ठेरोमा परेको र नेतृत्वले निर्वाचनमा प्रभाव पर्नेगरी काम गरेकोले आफूहरुले मान्यता नदिने संस्थापनइतरको ठहर छ । यता चितवन कांग्रेस पनि बेला बखत चर्चामा आउने गरेपनि अहिले यस बिषयमा खासै चर्चा गरेको देखिदैन । चितवनमा कांग्रेसले अझपनि चितवनवासीको मन जित्न सकेको छैन । आगामी महाधिवेशनपछि चितवन कांग्रेसको भविष्य कस्तो होला त ? पार्टीका एजेन्डा, योजना भावी रणनीति कस्तो हुनुपर्छ ? कसरी लैजानुपर्छ ? भन्ने बिषयमा चितवन कांग्रेसका जिल्ला सदस्य नबिनराज पौडेलसँग कांग्रेसको समग्र बिषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीः
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको सरमागर्मी सुरू भइसकेको छ । अब कोभिड–१९ प्रभाव मत्थर भएसँगै महाधिवेशन पनि तोकिएकै समयमा हुने बुझिएको छ। पार्टीमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम सकिएपछि महाधिबेसन हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । देशको परिस्थिति अवस्था हेरेर केही दिन, महिना हेरफेर हुन सक्ला तर अब धेरै ढिला भइसक्यो । जति ढिला महाधिवेशन गरिन्छ त्यति पार्टीलाई क्षति हुन्छ । जसले गर्दापनि महाधिवेशन समयमै हुने आशा छ ।
महाधिवेशन फागुनमै हुने सम्भावना कत्तिको छ ?
फागुनमा गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता सबै नेताहरुले गर्नुभएको छ । केन्द्रीय सभापतिको पनि छ । फागुनमा सम्पन्न गर्न कार्यतालिका समेत बनाइएको छ। तीन तहको संरचना अनुरुप अन्तरिम संरचना बन्ने क्रममा छ। त्यसैले केही महिना परसरेपनि निर्धारित समयमै महाधिवेसन हुन्छ । नेतृत्वको होडबाजी छ ।
अहिले पार्टीको प्रमुख प्रतिपक्ष दल को भूमिका कमजोर स्थितीमा छ। यद्यपि देशैभरी कार्यकर्ता कांग्रेस उमार्ने मेलोमा लागेका छन् । कार्यकर्ता रुस्ट भएपनि धेरै चिन्तित छन् । अब महाधिवेशनको विकल्प छैन । पार्टी बिग्रिएको छ, लथालिंग भएको छ । त्यसैले यो पटक नेतृत्व सहि छनौट भयो भने फेरी कांग्रेस जरैदेखि बलियो हुन्छ । त्यसको लागि सभापति विवादरहित, निस्कलंकित, बैचारिक क्षमताको हुनुपर्छ ताकि देशका अन्य शक्तिहरुले हेप्न नसकुन् ।
अहिलेको अवस्थामा धेरै आकांक्षी छन्, संस्थापनइतर पक्षको एउटा उमेद्वारी हुने सम्भावना के छ ?
अहिलेसम्म सबै प्रचारमा हुनुहुन्छ, को नेता हुने वा को सभापति हुने ? पछिको कुरा हो । निर्वाचनमा को सभापति लड्ने भन्ने त मनोनयन दर्ता गर्ने बेलामा थाहा हुन्छ । सभापतिको आकांक्षीमा मात्रै आधा दर्जन नेताको रहेको भन्ने सुनेको छु । अब आन्तरिक रुपमा छलफल भएपछि टुंगो लाग्ला । अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
तपाईंको पनि चितवन कांग्रेसमा चर्चा छ, केमा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ ?
म भर्खरै पार्टीको पोलिटिक्स र समितिमा आएको छु । धेरै बर्ष पार्टीको प्रचार विभाग र संचार समन्वयमा काम गरें । अब जिल्लाभरिका साथीभाईको चाहना बुझेर जिल्ला समितिको पदाधिकारी बन्ने प्रयासमा छु । हेरौं समयले कत्तिको साथ दिन्छ ।
चितवन काँग्रेसमा अबको सभापति को बन्ला ?
धेरै साथीहरु मैदानमा हुनुहुन्छ यो वा त्यो गुट नभनी एकाकार गरी आगामी चुनाव हाँक्न सक्ने पार्टीलाई जिताउन कटिबद्द एक जना कोही पक्कै सभापति हुनुहुन्छ ।
तपाईंको विचारमा अबको कांग्रेस कस्तो हुनुपर्छ ?
अब मात्र होइन कांग्रेस सधैं बिचारसहित अडिलो र स्वाबलम्बी हुनुपर्छ । जसको नेतृत्व सबैले सहज स्विकार्ने खालको होस् । गुटउपगुटको अन्त्य होस् । सबै नेता कार्यकर्ताको भावना बुझेर आ–आफ्नो जिम्मेवारी दिइयोस् । पार्टीमा योगदान दिएका, पार्टीप्रति समर्पित र निष्ठावान व्यक्तिलाई ठाउँदिने परिपाटी बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।